Mashiinka Kartoonada warshad xabagta wax lagu xiro iyo alaab-qeybiyeyaasha | DESAY
Caddaymaha: 0.5L 、 0.68L 、 1L 、 1.3L 、 5KG 、 10KG 、 25KG
Midabka bannaanka: caano
Waxyaabaha adag: 50-55%
(1) daaweyn horudhac ah: xabagta si siman u walaaq
(2) qiyaasta: xabagta ayaa lagu daraa meesha kaydinta xabagta ee u dhiganta, mashiinkana waa la bilaabi karaa
(3) daweynta: kartoonada / kartoonada ka soo baxa mashiinka ka dib marka la isku geeyo ama mar labaad la is dul taago, si koolladu si buuxda u wada adkaadaan
(4) in laga hortago ifafaalaha boodboodka.
Magaca badeecada: xabagta dhagixiinta khaaska ah ee mashiinka dhajinta sanduuqa
Nooca SIFAL - H
Waqtiga daaweynta 5-10 daqiiqo
magaca sheyga Dahaarka mashiinka kartoonka Magaca sumadda deay
nooca SEAL-H Nafwaayay（MPS.S) 18000 ± 2000
Sooc 0.5L、0.68L、1L、1.3L、5KG、10KG、25KG PH 6-7
Midabka bannaanka caano Waqtiga daaweynta 10-30min
Waxyaabaha adag 50-55% Nolosha shelf 12 bilood
1 cos Nafaqo xoog leh iyo waxyaabo deggan
2、Kooladu waxay noqotaa mid hufan ka dib adkeynta
Ku habboon kartoonka dahabka ah, warqad daabacan midab leh iyo waraaqo kale oo hal dhinac leh iyo baakadaha baakadaha caaga ah, sanaadiiqda hadiyadaha, shaabadaynta, xiritaanka geesaha.
Si toos ah ayaa loogu rinjiyeyn karaa mashiinka iyada oo aan lagu darin biyo iyo khafiifin. Si fiican u walaaq kahor isticmaalka. Hubso inaad ku haysatid xabagta xaalada qoyan. Kadib isku xidhka, maaddada waa in lagu hayaa in ka badan 30 daqiiqo, ka dibna si dabiici ah loo qalajiyaa.
1. Ha ku qasin badeecadan xabag kale, haddii kale xabagta ayaa ka sii dareysa oo lama isticmaali karo.
2. Xir isla markiiba ka dib qaadashada xabagta si aad uga fogaato qalajinta hawada iyo maqaarka. Qalabka xabagta qaadku waa inuu ahaadaa mid nadiif ah, si uusan u keenin wax wasakh ah oo u saameeyo tayada.
3. Qalabka OPP iyo BOPP waa kuwo aan firfircooneyn oo adag in loo hoggaansamo. Sidaa darteed, waa in loo adeegsadaa iyadoo la raacayo habka qalliinka marka loo hoggaansamo. Haddii kale, dilaaca ayaa si fudud u dhici kara.
4. Haddii saamaynta isku xidhka ay fiicantahay, fadlan u fiirso 8 saacadood oo qalajinta ka dib.
Midabka iyo u nuglaanshaha sheygan ayaa is beddeli doona waqtiga keydinta iyo heerkulka. Waa hanti asalka u ah xabagta, laakiin ma saameynayso saameynta isku xirnaanta ee xabagta.
Isticmaalka ka dib, waa in la xidho oo lagu kaydiyo meel qalalan oo qabow, heerkulku waa (10 ~ 30 ℃), kana fogow iftiinka qoraxda tooska ah.
Hore: 110 nooc kraft warqad xabagta dareere ah xabagta dareeraha ah
Xiga: Manjo Manjo Manjo
Dahaarka mashiinka kartoonka